Shariif Xasan oo gaaray magaalada Baydhabo iyo banaan bax looga soo horjeeday oo ka dhacay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shariif Xasan oo gaaray magaalada Baydhabo iyo banaan bax looga soo horjeeday oo ka dhacay
23rd March 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Mareeg.com-Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in banaan bax ballaaran oo looga soo horjeedo Xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan uu ka socdo magaalada qeybaheeda kala duwan, iyadoo diyaarad sida Shariifka ay caga dhigatay garoonka diyaaradaha Baydhabo.
Dadweyne careysan ayaa banaanka garoonka diyaaradaha isku gedaamay ka hor inta aysan diyaarada soo degin, iyagoo taayaro gubay, waxaana dadweynaha ay ku qeylinayeen erayo ay ka mid yihiin “Dooni meyno dooni meyno Shariif Xasan”.
Banaan baxa ayaa bilowday ka hor inta aanay diyaarada siday Shariif Xasan ka ambabixin magaalada Muqdisho, iyadoo dibad baxayaashu ay ahaayeen kuwo ka war qabay imaanshaha Shariifka
Wararka ayaa sheegaya in Shariif Xasan ay la socdaan saraakiil Itoobiyaan uu ka mid yahay Jen. Gabre iyo siyaasiyiin kale, waxaana qorshaha Shariifka uu tagay Baydhabo ka mid tahay dhameystirka dhismaha Maamulka saddexda gobol.
Mid ka mid ah dadka ku nool Baydhabo oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay in dadweynaha careysan ay buux dhaafiyeen afaafka hore ee garoonka, iyagoo ka soo horjeeda imaashaha Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Shariif Xasan ay kula taliyeen madaxda dowladda in aanu tagin Baydhabo, iyadoo Shariifka uu gadaal ka riixayo Maamulka saddexda gobol oo la sheegayo inuu musharax yahay.
Shariif Xasan ayaa barta uu facebook uu ku leeyahay waxaa uu shalay ku soo qoray inuu ku sii jeedo magaalada Baydhabo oo uu u tagayo arrimo muhiim ah.
Magaalada Baydhabo ayaa waxaa dhowaan lagu doortay Madaxweynaha Maamulka Koofur galbeed Soomaaliya oo loo doortay Madoobe Nuunow Maxamed
Al Shabab commanders hiding in Mogadishu- Amisom head says